मलाई पराजयको अलिकति पनि पिडा भएन--पिंकी यादव
अन्तरवार्ता 64 पटक पढिएको क्रान्तिद्वार दैनिक
देशमा आएको संघीयताले महिलालाई पनि धेरै अधिकार दिएको छ – पिंकी यादव
बुवा बिन्देश्वरी प्र।यादव तथा आमा जनारसी देवी यादवको दाम्पत्य जिबनवाट ई। स। १९७८ सेप्टेम्बर २१ मा भारत विहारको रक्सौलमा जन्मिएकी पिंकी यादव चार दिदीबहिनी र दुई दाजुभाई मध्येको दोस्रो सन्तान हुन उनि । शिक्षित र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमीमा उनको बाल्यकाल राम्रो वितेको उनले बताइन् ।
२१ बर्षको उमेरमा धार्मिक रितिरीवाज अनुसार पर्सा जिल्लाको मनियारी निवासी प्रदिप यादव संग विवाह बन्धनमा बाधिन पुगेकी हुन् । हाल यादव समाजवादी पार्टी नेपालको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत रहेका छन । विवाहपछि पनि घर परिवार र श्रीमानको सहयोगबाट बिएड सम्म अध्ययन गर्न सफल उनी घर परिवार छोराछोरी कार्यक्षेत्र र राजनीतिलाई अगाडी बढाउँदै आएकी छन् ।२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा वीरगंज महानगरबाट उपमेयर पदमा प्रतिस्पर्दा गर्दै राजनीतिमा लागिरहेकी छन् । हाल महिला समाजवादी पार्टी प्रदेश नं. २ को उपाध्यक्ष पदमा रहि सामाजिक तथा राजनितिक क्षेत्रमा सकृय भई कार्य गरिरहेकी पिंकी यादवसंग गरेको कुराकानी स्
वर्तमान समयमा महिलाहरुको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
पहिलाभन्दा अहिले धेरै महिलाहरु अगाडी बढिरहेका छन् । पहिला महिलाहरु जति क्षमतावान भए पनि घर परिवार र समाजले हेर्ने नराम्रो दुष्टिकोणका कारण महिलाहरु चुप लागेर घरमै बसी घरको कामकाज गर्न बाध्य थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । लामो समयको अन्तराल पछि देशमा आएको संघीयताले महिलाहरु पनि धेरै अधिकार उपभोग गर्न र राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका छन् । विगत दुई दशकपछि भएको स्थानीय निकाएको निर्वाचनमा पनि धेरै महिलाहरु घर बाहिर निस्केर चुनाव लडी देश र जनताको पक्षमा नेतृत्व पनि गरिरहेका छन् । जुन पहिला थिएन ।
पहिले महिलाहरु घरबाट निस्किदा पनि घर परिवार र समाजबाट अपहेलित हुनु पथ्र्यौ । जुन अहिले विस्तारै हट्दै गएको छ । राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ लगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको पहँुच बढिरहेको छ । देशको हरेक निकायमा जब सम्म महिलाको समान प्रतिनित्व हुदैन तबसम्म कुनै पनि क्षेत्र वा देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि जनतालाई अवगत भइसकेकोले हरेक घरबाट कुनै न कुनै क्षेत्रमा महिलाहरुको सक्रियता बढि नै रहेको छ ।
महिलाहरु प्रमुख नेतृत्व तहमा आउन नसक्नुको कारण के पाउँनु भएको छ?
राज्यले महिलालाई जति अधिकार दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा कहिनकही चुकेको अवस्था छ । अधिकार दिए पनि धेरै ठाउँमा महिला भएकै कारण महिलालाई दबाएर राखिएको पनि अवस्था छ ।
महिला जति क्षमतावान भए पनि अहिले पनि समाजमा महिलालाई घरको काममा मात्र सिमित राख्ने, बच्चाहरुको पालनपोषण गरी चुलोचौकामा नै सिमति राख्ने काम भइरहेको छ । यो पं्रवृति हटिसकेको छैन । मुल नेतृत्व तहमा आउने महिलाहरुलाई पनि कुनै न कुनै बाहानमा दबाएर राखिन्छ नै । उदाहरणको लागी प्रधानन्यायाधिश भएकी शुशिला कार्कीलाई लिन सक्छौ । यतिका वर्षसम्म पिछडिएर रहेका धेरै महिलाहरु अहिले उप—प्रमुख पदमा निर्वाचित भई न्यायिक क्षेत्रमा अवसर पाई काम गरिरहेका छन् । तर जुन स्वतन्त्रताले काम गर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार काम गर्ने वातावरण छैन । हरेक ठाउँमा गुट –उपगुटको कुरा उ्रच्च विन्दुमा छ । समाजमा अहिले पनि घरको काम देखाएर महिलालाई बाहिर निस्केर अगाडी बढ्न नदिने प्रवृति हावी नै छ ।
महिलाहरुलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन अब के गर्नु पर्छ?
नेतृत्व वर्गले महिलालाई पनि राजनीतिक, सामाजिक, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा पुरुष जतिकै समानजनक समायोजन गर्नु पर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा महिलालाई बिना दबाब स्वतन्त्र रुपमा सहि कार्य गर्नमा प्रोत्साहन गरी क्षमता अनुसार पदमा पनि समायोजन गर्नुपर्छ । जबसम्म महिलाहरु घर बाहिर निस्किदैनन् तबसम्म उनीहरुलाई बाहिरको वातावरण बारे जानकारी हुदैन ।
अहिले प्रायः महिलाहरु उप–प्रमुुख पद सम्हालीरहेका छन् । केही ठाउँमा महिलाहरुलाई हेपिए पनि धेरै ठाउँ जिम्मेवारी पूर्वक नेतृत्व चलाइरहेका उदाहरण हामी माझ सर्वत्रै छ । महिलालले घरायसी सबै काम सकेर बच्चाहरुको स्याहारसुसारको साथै परिवारका हरेक सदस्यको ध्यान दिनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण नेतृत्व वर्गले पुरुष जस्तै महिलालाई पनि सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न अवसर दिनुपर्छ ताकी भोलीको दिनमा धेरै महिलाहरु मेयर, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद र प्रधानमन्त्री पदमा समेत पुग्न सक्षम हुन् ।
अहिले स्थनीय तहमा पुगेका उपमेयरहरुको जिम्मेवारी पनि घुमाउरो पारोले श्रीमान्हरुले नै चलाइ रहेका छन् । यसलाइ तपाई के भन्नु हुन्छ ?
यो एकदमै गलत परिपार्टी हो । यसरी महिलाहरु कहिले पनि अगाडी बढ्न सक्दैनन् । काम गर्न अवसर पाउने महिलालाई केही पुरुषहरुले नै दबाएर अगाडी बढ्नबाट बञ्चित गरिरहेका छन् । काम गर्ने ठाउँमा श्रीमान्, परिवार वा कुनै व्यक्तिले सहयोग गर्नु ठिक हो तर महिलालाई मूर्ति जस्तै देखाएर आफै पद चलाउने श्रीमान्लाई नेतृत्व पाएका महिलाहरुले पनि कडा बिरोध गर्नु पर्छ । किन भने पाएको अवसरमा उनीहरु काम गर्दैनन् भने भोलीको दिनमा अगाडी बढ्न सक्दैनन् ।
आज उप–प्रमुखको पद चलाएर सक्षम भएपछि मात्र भोली प्रमुख, सांसद, प्रदेश वा राष्ट्र चलाउन सक्षम हुन्छन् । हैन भने अवसर पाएर पनि केही नगरी चुलोचौका मै सिमित रहन्छन् । अलि अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा श्रीमान् वा कर्मचारीको पनि सहयोग लिएर आफैले काम गरि अगाडी बढ्नु पर्छ ।
तपाई वीरगंज महानगरपालिकाको उपमेयरमा पराजित भए पनि निर्वाचित उपमेयरलाई के कस्तो सुझाव र सहयोग गरिरहनु भएको छ?
महानगरको उप–प्रमुुखमा पराजित भएर पनि नगरका महिलाहरु आत्मनिर्भर बनी आर्थिक आय आर्जन गर्न सक्ने उदेश्यले नगरभित्र विभिन्न किसिमका सिलाई कटाई, व्युनिसियन जस्ता सिपमूलक तालिम दिलाई उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्ने कार्यमा सघाई रहेको छु । धेरै जनाले मलाई पराजित गरेर शान्ति कार्कीलाई वीरगंजको उप–मेयर चुन्दा मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो । मलाई पराजयको अलिकति पनि पिडा भएन किन भने अविवाहित भएर लोकतन्त्र र जनताको लागी लामो समयसम्म संघर्ष गरेर आएकी शान्ति कार्कीलाई जनताले जिताउदा म पनि खुसी नै छु । जनता तथा धेरै महिलाहरु पनि उपमेयरसंग विकासका धेरै आपेक्षा राखेका छन् । तर जनचाहना अनुसार वहाकै पार्टीले काम गर्न दिईरहेको अवस्था छैन ।
लामो संंघर्षपछि शरिर अशक्त भएको अवस्थामा पार्टीले उनलाई उपमेयर लागी मात्र टिकट दिएकोले उनले जनता र पार्टीको लागी दिएको योगदानको कदर नेपाली कांग्रेसले पनि गर्न सकेन । युवा अवस्थामा नै पार्टीले शान्ति कार्कीलाई टिकट दिएको भए आज उनी पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै पदमा भएर देशको नेतृत्व गर्न सफल हुने थिइन् । तर नेपाली कांग्रेसले विभेद गरी बृद्ध भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उनलाई टिकट दिदा उपमेयर पदमा निर्वाचित भए पनि पार्टीका केही प्रतिनीधिहरु आफ्नै तरिकाले काम गराई रहेका छन् । त्यस अनुसार पार्टीको प्रतिनिधिका कारण जनता अथवा महिलाहरुको हकमा काम गर्न चुकेको अवस्था छ । काम गर्ने राम्रो सोच भए पनि शारीरको अशक्तताले सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।
निर्वाचन पछि राजनीति कार्यक्रममा यहाँको सक्रियता कतिको बढेको छ ?
चुनाव लड्नुभन्दा पहिलादेखि नै समाजिक तथा राजनीति क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेको छु । खास गरी हाम्रो मधेशी समाजमा धेरै महिला क्षमतावान भएर पनि घर भित्रै घुङ्घटमा बसेका हुन्छन् । त्यस मध्ये धेरै महिला समाजिक तथा राजनीतिक कार्यमा आवद्ध हुन चाहन्छन् । त्यस्ता धेरै महिलाहरुलाई घुङ्घटको घेराबाट समाजमा सम्मानजनक प्रतिनिधीत्व गर्ने वातावरणमा ल्याउन सघाउदै आइरहेको छु । गरिब, दलित, पिडित भएका महिलाहरुको उत्थान हुने कार्यमा निरन्तर खटिरहेको छु ।
श्रीमान्रश्रीमती दुबै जना राजनीति पेशामा । यसले व्यक्तिगत जिवनमा कतिको असर पार्छ?
महिलाहरु आाफ्नो घरको सबै कामकाज गरेर पनि राजनीतिमा समय दिन सक्छन् । राजनीतिमा पुरै समय जनतामा नै दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । मेरो परिवार धेरै नै ठुलो छ तर पनि म विहान र रातीको घरको सबै काम गरी जनताको लागी दिनमा समय दिदै आएको छु । कुनै काम बस बाहिर जानु प¥यो भने घरका अरु सदस्यहरु घरायसी कामकाज लगायत अरु काममा पनि सहयोग गर्नु हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिले व्यक्तिगत जिवन वा परिवारमा कुनै किसिमको प्रभाव परेको छैन । हाम्रो परिवारमा सबैजना एकअर्कालाई काममा हातोमालो गरी सहयोग गर्ने गर्छन । महिलाहरु घरको सबै काम गरेर पनि पुरुषले गर्ने जति काम बाहिर पनि गरिरहेका छन् । त्यसअनुुसार म पनि गर्दैछु । राजनीतिले परिवारमा कुनै किसिमको असर परेको छैन् ।
हिजोको दिनमा स्थानीय चुनावमा पराजित हुनुको कारण यहाँले के पाउँनु भएको छ ?
निर्वाचित भएकी उपमेयर शान्ति कार्की लामो संघर्ष र ईतिहास बोकेका महिला हुन । उनी पुरा जिवन नै देश र जनताको लागी सर्पित गरिन् । त्यही योगदानको कदर गर्दै जनताले उनलाई जिताए । त्यसकारण परा्जित भएर पनि म खुशी नै छु । किन भने जिवनको पुरा समय नै नेपाली कांग्रेसमा विताए पनि पार्टीले उनलाई उचित ठाउँ दिएको थिएन । तर बृद्ध अवस्था काटिरहेको बेला पार्टीले टिकट दिदाँ उनले गरेको संघर्षको कदर गर्दै आगामी निर्वाचनमा चुनाव लडन सक्षम रहनेछिन् कि छैनन् भन्ने सोचले जनताले उनलाई जिताए, त्यस कारण म पराजित भए ।
अबको आउदो दुई वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ । के को तयारीमा हुनुहून्छ यहाँ ?
च्ुाुनाव लड्नु पूर्व नै समाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्दै आईरहेको छु । आगामी दिनमा पनि चुनाव लड्ने तयारीमा नै लगेको छु । नगरपालिकामा हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा गरिब, दलित पिडित परिवारको सुख, दुःखमा हातोमालो गर्दै सधै जनताको सेवामा आफुलाई समर्पित गरेको छु । आफ्नो शक्ति, क्षमता र पहुँचको बलमा समाजमा विभिन्न सेवा तथा सिपमुलक कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आईरहेको छु । समय र परिस्थीति अनुसार जनताल गरेको मुल्याङ्खनको आधारमा नै समय अनसार तय गर्ने छु ।
1485519	Times Visited.